Intel က 1.6Tbps ကတိပေးထားသည့် optical cable ကိုတီထွင် - သတင်း Rule
Intel က 1.6Tbps ကတိပေးထားသည့် optical cable ကိုတီထွင်
CHIPMAKER Intel ကအဲဒါကိုဒီနှစ်၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်စတင်နေသည့်အခါစူပါနှင့်အချက်အလက်စင်တာများမှကြီးမားသောမြန်နှုန်းတိုးမြှင်ဇျောပါမညျဟုတစ်ဦး 800Gbps optical cable ကိုတီထွင်ခဲ့သည်.
အမှာကုန်ပစ္စည်းကြေငြာများတွင် optical Fibre San Francisco မှာညီလာခံ, Intel ကသူ့ရဲ့ဆီလီကွန်ဖိုတွန် Interconnection နည်းပညာကိုပေါ်အခြေခံပြီးကပြောပါတယ်, နှင့် optical စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကစားသမားတစ်ဦးအရေအတွက်၏ပံ့ပိုးမှုရှိပါတယ်, Corning အပါအဝင်, အမေရိကန် Conec, TE ဆက်သွယ်မှု, Molex နှင့်အခြားသူများ.
အဆိုပါ chipmaker ကြောင့်ခေါ်ဆို MXC connector ကိုနည်းပညာကို, ဒေတာစင်တာများအထဲမှာကုန်ကျ-ထိရောက်သော optical Interconnection အဖြစ်ရည်ရွယ်သော.
MXC, Intel ကပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစတင်ခဲ့ရာ, အထိကိုထောက်ပံ့မယ့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း Interconnection ဖြစ်ပါသည် 64 အမှငျြ, စတုရန်းမီတာ 300 အထိအကွာအဝေးကျော်စုစုပေါင်း 1.6Tbps bandwidth ကိုအဘို့အအချက်အလက်များ၏ 25Gbps အထိတင်ဆောင်အသီးအသီး. ဒါဟာ Corning နှင့်အတူပူးပေါင်းတီထွင်ခဲ့, သောအစဉ်အလာအမျှင်ထက်တင်းကျပ်တဲ့ခါးဆစ်ပတ်ပတ်လည်တငျခံရဖို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Clearcurve optical fiber ကိုထောက်ပံ့ပေး.
အဆိုပါနည်းပညာကို Intel ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ဒေတာစင်တာပဏာမခြေလှမ်းဟုအမည်ပေးထားသည့်တန်း Scale ကိုဗိသုကာပညာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်, ကွန်ပျူတာရဲ့ရေကန်သို့တစ်ဦးချင်းစီဆာဗာများခွဲပြီးရည်ရွယ်သော, အထိန်သိမ်း level မှာသိုလှောင်မှုနဲ့မှတ်ဉာဏ်, ထိန်သိမ်းအတွင်းနှင့်အကြားနှစ်ဦးစလုံးဆက်သွယ်မှုများအတွက်အသုံးပြုဆီလီကွန်ဖိုတွန်နှင့်အတူ.
Intel ရဲ့ Data ကို Stack ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတစ်ပို့စ်တွင်, ကုမ္ပဏီလည်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ Microsoft က ၎င်း၏ MXC မွေးစားဖိုရမ်မှီဝဲ.
Cloud ကို Server ကိုအင်ဂျင်နီယာ Microsoft ရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာ, သာ Kushagra, MXC နည်းပညာကိုဖွစျလိမျ့မညျဟုဆိုသည် “ကရိယာတန်းဆာပလာနှင့်ဆိုင်သော” နောက်မျိုးဆက်က high-performance ကိုဒေတာစင်တာ Architecture ကပုံဖော်အတွက်.
“ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်ခွဲဝေမှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမွေးစားအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ Intel နဲ့ OCP တူဖွင့်စံချိန်စံညွှန်းအလောင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်,” ဟုသူကပြောသည်.
MXC ကေဘယ်လ်ကြိုးအတှကျအဓိကအသုံးအမှုထိပ်တန်း-of-ထိန်သိမ်း switches များနှင့် core ကို switches များအကြားပိုမိုမြန်ဆန်ဆက်သွယ်မှုများကိုပါဝင်, နှင့်အပိုသိုလှောင်မှုကိုသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ထိပ်တန်းမှဆာဗာများချိတ်ဆက်များအတွက်, Intel ကပြောပါတယ်.
21671	0 Clearcurve, Corning, data center, Intel က, Microsoft က, Molex, MXC, TE ဆက်သွယ်မှု
← 20 ရောင်ရမ်းခြေထိရောက်သောမူလစာမျက်နှာကုစားခြင်းများ မလေးရှားဂျက်လေယာဉ်အဘို့အရှာဖွေရေးအတွက်တပ်ဖြန့်ခြောက်ယောက်ကိုအိန္ဒိယသင်္ဘောများ →